Warar ku saabsan iPhone | Warka IPhone (Bogga 12)
Fiidiyowyada lagu dayactirayo iPhone-kaaga oo Apple uusan rabin inaad aragto
Kuwani waa fiidiyowyada ay Apple tusayso shaqaalaheeda farsamada ee gacanta ku haya dayactirka iyada oo caawimaaddooduna ay "fududdahay" in la dayactiro.
Furitaanka Apple Store ee magaalada Milano waa joogga magaalada
Dukaanka Apple ee ku yaal magaalada Milaano wuxuu ahaan doonaa meesha ugu sareysa magaalada tusaalahan ugu horeeya waxaan ka arki karnaa tayada naqshadeeda.
WhatsApp waxaa ku jiri doona horudhaca muuqaalka warbaahinta
Cusboonaysiinta ugu dambeysa ee loo qorsheeyay cusbooneysiinta WhatsApp ee mustaqbalka waa in lagu daro aragtida muuqaalka ee wargelinta.
Spotify ayaa ka dambeysa Mareykanka sida uu qabo CIRP
75 milyan oo ka mid ah 170 milyan ee isticmaaleyaasha Spotify ee firfircoon ayaa ah macaamiisha ugu sarreeya. Ku dhowaad 45% dadka isticmaala adduunka ayaa bixiya.
eBay waxay taageeri doontaa Apple Pay dabayaaqada sanadkaan
Si tartiib tartiib ah, Apple Pay waxay noqoneysaa mid kamid ah aaladaha loogu adeegsiga badan yahay habka lacag bixinta ee nolol maalmeedka adeegsadayaal badan, mahadnaqa bogga xaraashka eBay, waxay hada shaacisay inay ku bixin doonto taageero Apple Pay at dhamaadka sanadkan, inkasta oo xilligan la joogo oo keliya Maraykanka.
Philips waxay soo saartay alaab cusub oo Hue ah oo dibedda ah
Philips waxay soo saartay badeecooyin cusub oo ku jira qaybta 'Hue' oo ah xarigyo adag oo si buuxda u shaqeynaya.
Maqnaanshaha AirPower, Samsung waxay bilaabeysaa bedelkeeda
Maqnaanshaha AirPower, Samsung waxay dooneysay inay ka faa'iideysato jiidista oo ay soo bandhigto nooc u gaar ah, Xarkaha wireless-ka.
Isbeddelka ciyaaraha fiidiyowga, muhiimaddooda dhaqaale iyo ka-qaybgalka WHO
WHO waxay ku dhawaaqday in cilladda ciyaarta fiidiyowga ay tahay cudur cusub oo lagu soo daray liiska cudurada. Sidee loo joojin karaa?
Hal sano oo dheeraad ah BOE Teknolojiyada Kooxda, waxaa loo magacaabay soo-saare ka mid ah barnaamijyada OLED ee shirkadda Apple
Tani waxay umuuqan kartaa warar soo noqnoqday waana sanadkii la soo dhaafay dhamaadkiisa Nofeembar sidoo kale waxaa jiray hadal heynta ...
Caafimaadka batteriga on iOS, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxa ku saabsan
Waxaan dooneynaa inaan kaa caawino inaad waxbadan ka fahamto fikradda caafimaadka bateriga ee ku jirta macruufka, waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin iyo fikradaha dammaanad qaadku ka fikirayo.
Daad badan oo ku saabsan iibsashada iTunes-ka khiyaanada ah ee dalalka Aasiya
Gudaha Singapore, eedeymo badan oo musuqmaasuq ah ayaa lagu soo wargeliyaa akoonnada iTunes ee ku kacaya boqollaal yuuro.
HomePod wuxuu lahaan doonaa taageero wicitaanada iyo shaqooyinka kale iOS 12
HomePod waxaa ku jiri kara astaamo cusub oo xiiso leh xilligan dayrta oo ay weheliso bilaabista iOS 12, sida awoodda wicitaannada.
Ed Sheeran 'Documentary' cusub 'Hees qoraa' oo Imaanaya Apple Music Bishii Ogosto
Farshaxamiistaha caanka ah Ed Sheeran wuxuu ku dhawaaqayaa imaatinkiisa dokumenteriga heesta ah gaar ahaan barnaamijka Apple Music inta lagu jiro bisha Ogosto.
Xogta iCloud ee isticmaaleyaasha Shiinaha ayaa hadda ku jirta gacanta shirkad ay maamusho dowladda
Dhowr bilood ka hor, waxaan ka dhawaajinay war, kaas oo lagu sheegay, Apple-na ay xaqiijisay, in dhammaan xogta adeegsadayaasha adeegsada asturnaanta iCloud ee wax u adeegsadayaasha Shiinaha waligood aysan dhab ka noqon, sidaa darteed la'aanta ka mid ah ayaa joojiyay welwelkooda.
Spotify waxay rabtaa fanaaniinta inay kula taliyaan heesahooda
Spotify waxay waydiisaneysaa fannaaniinta inay u soo gudbiyaan heesahooda kooxda ku talinaysa horumarinta Playlist-ka inay ku beero caddaalad inta ugu badan ee suurtogalka ah.
Apple wuxuu ka saarayaa qaybta Doorbell liiska qalabka 'HomeKit'
Ragga Cupertino waxay go'aansadeen inay dib udhacaan iyagoo ka saaraya qaybta ringtones liiska qalabka ku habboon HomeKit.
Dhaqammada xun ee Google waxaa ku baxay $ 5.000 bilyan
Midawga Yurub ayaa soo afjaray ganaax ay saareen Google taas oo ka badnayd 5.000 oo milyan oo doolar habdhaqanka keli-taliska.
Corning wuxuu soo bandhigayaa Gorilla Glass 6, Muraayaddii ugu Adkayd ee Abid La Sameeyo
Corning wuxuu soo bandhigayaa Gorilla Glass 6, oo ah daabacaadda ugu adkeysiga badan ee abid la abuuray taas oo kor u qaadi karta iPhone-ka cusub ee la qorsheeyay dhammaadka 2018.
Kuwani waa cayayaanka cusub iyo kuwa ku tagaya iOS 12 beta 4
Ciladdii ugu horreysay ee la xalliyey oo shaki la'aan qancin doonta adeegsadayaal badan ayaa si sax ah u ah kan hor istaagay ku raaxeysiga saxda ah ee Fortnite.
36% dhammaan taleefannada casriga ah ee ku shaqeeya Q2 waxay ahaayeen iphone
Apple waxay horumarisay xogteeda ku saabsan taleefannada casriga ah ee la shaqeeyay intii lagu jiray Q2 2018. Waxay ku guuleysatay in 36% ay yihiin iPhones, marka loo barbardhigo 36% waa mobiillada Samsung.
Beta beta saddexaad ee iOS 12 hadda waa la heli karaa
Maalin ka dib markii la bilaabay beta-kii afaraad ee loogu talagalay horumariyeyaasha iOS 12, shirkadda ku saleysan Cupertino ayaa bilawday, nooca u dhigma ee iOS 12 seddexaad beta beta ayaa hadda heli kara dhammaan isticmaalayaasha kuwaas oo qayb ka ah barnaamijka beta ee Manzana.
Ka mid noqoshada heer teknolojiyadeed sidoo kale waa suuragal: Emojis
Apple waxay fiiro gaar ah u leedahay dhammaan faahfaahinta. Si loogu dabaaldego Maalinta Emoji Adduunka, wuxuu iftiimiyay imaatinka in ka badan 70 emoticons cusub illaa iOS 12.
Betas 4 ee iOS 12, tvOS 12 iyo watchOS 5 ayaa imanaya
Apple waxay soo saartay Beta afaraad ee iOS 12 iyo sidoo kale Betas u dhiganta ee watchOS 5 iyo tvOS 12, oo lagu daray macOS Mojave oo shalay la bilaabay.
Nabadgelyo Cydia!: Electra waxay ku dhawaaqeysaa ku darista maareeye cusub oo la yiraahdo Sileo
CoolStar, Electra oo ah "madaxa" mashiinada, ayaa ku dhawaaqay inay joojinayaan rakibaadda Cydia si ay u bilaabaan rakibida maamule cusub oo la yiraahdo Sileo
Dabaaldegga Maalinta Emoji, Apple waxay u beddeshay guddigeeda oo dhan Memojis
U dabaaldega Maalinta Emoji Adduunka, Apple waxay go'aansatay inay u beddesho guddigeeda oo dhan Memojis qosol badan oo ku saabsan websaydhka shirkadda.
LG waxay heshiis la gaadhay shirkadda Apple si ay u bixiso shaashadda OLED iyo LCD
Samsung waxay lahayd sharaf, inay ugu yeerto wax, inay noqoto soosaaraha ugu weyn uguna dhow ee kaliya shaashadda iPhone-ka ugu horreeya ee leh teknolojiyadda OLED. Nooca soo socda ee iPhone, waxay umuuqataa in kaliya aysan soosaari doonin Samsung OLED Panel, laakiin LG wuxuu noqon doonaa mid kale oo kamid ah alaab-qeybiyeyaasha, in kasta oo miisaankiisu yaryahay.
Instapaper, waxay noqotaa mid madax-bannaan mana ka sii mid aha Pinterest
Sannadihii ugu dambeeyay, Instapaper waxay noqotay, oo ay weheliso Pocket, labada adeeg ee ugu waawayn ee lagu kaydiyo xiriiriyeyaasha sidaasna ay ku awoodaan inay ku akhriyaan qadka tooska ah.
BBVA iyo BancaMarch hadda waxaa laga heli karaa Apple Pay
Apple iyo BBVA ayaa hadda hawlgeliyay adeegga Apple Pay ee kaararkooda. BBVA wuxuu ahaa bangiga weyn ee Isbaanishka ee aan weli ku biirin.
Apple waxay joojisay adeegkeedii daabacaadda sawirrada waxayna nagu dhiirrigelisay inaan adeegsanno adeegyo dhinac saddexaad ah
Apple waxay go'aansatay inay joojiso adeegsiga daabacaadda sawirkeeda adeegsi hooseeya awgood waxayna nagu dhiirrigelisay inaan adeegsanno adeegyo dhinac saddexaad ah.
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa keydka macluumaadka Eurasia wuxuuna xaqiijiyaa seddex iphone cusub
Lambarada u dhigma aaladaha cusub ee Apple ayaa lagu cusbooneysiiyay keydka Eurasia si loo xaqiijiyo inay la imaan doonaan iOS 12.
Muusikada YouTube waxay ku guuleysataa kaalinta koowaad ee App Store oo leh cabashooyin badan
Tayada muusigga, ku ciyaarida asalka iyo hagaajinta lacagta ee madal ayaa sababtay dadka isticmaala inay ka cawdaan.
Carpool Karaoke: Taxanaha wuxuu helay Magacaabis Emmy Award
James Corden wuxuu hoosta ka xariiqayaa budada Apple Music, Carpook Karaoke: Taxanaha, waxaa loo magacaabay Emmy oo ka socda Akadeemiyada Mareykanka
Apple wuxuu ugu dabaaldegayaa finalka Koobka Adduunka kubbadda cagta websaydhada finalka
Websaydhada Croatia iyo France waxaa lagu casriyeeyay muuqaal yar oo cadeynaya inay joogaan finalka Koobka Aduunka ee maanta dhamaanaya.
Adobe Photoshop ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhacay iPads sanadka 2019
Soo bandhigida Adobe MAX waxaan ku arki karnay horumarkii ugu horreeyay ee Adobe Photoshop ku saabsan iPad kaasoo si rasmi ah u imaan lahaa 2019.
Khal Drogo (Jason Momoa) oo ka socda Game of Thrones wuxuu ku jiri doonaa wax soo saarka Apple
Imaatinka suurtagalka ah ee sheekada khayaaliga ah ee Khal Drogo oo ka yimid Game of Thrones (Jason Momoa) ilaa adeegga soo socda ee fiidiyowga Apple ayaa la sifeeyey.
IPhone-kaaga si nacasnimo ah uma xirnaan doono hadaad qorto "Taiwan"
Apple waxay hagaajisay khaladaadka koodhka ee xidhay boosteejooyinka markii aad qortay erayga "Taiwan".
Sonos iyo AirPlay 2: sida loo cusbooneysiiyo iyo sida ay hadalladeena u badalaan
Cusbooneysiinta Sonos ee muddada dheer la sugayay ee ku habboonaanta AirPlay 2 hadda waa la heli karaa waxaanna sharraxeynaa sida loo rakibo iyo sida Sonos-kaaga isu beddelo
Apple wuxuu helayaa xayeysiinta ugu wanaagsan ee Koobka Aduunka 2018 ee Russia oo ay la socoto AirPods
Ragga ka socda Cupertino waxay maareeyaan inay noqdaan sumcadda ugu muuqata inta lagu guda jiro Koobka Adduunka ee Russia iyaga oo aan ahayn kuwa kafaala qaadaya mahadnaqooda AirPods-ka kubbadda cagta.
Sida loo maareeyo ogeysiisyada kooxeed ee iOS 12
Waxaan ku tusineynaa sida aad u maamuli karto nidaamka wargelinta kooxaysan ee macruufka 12. Sidan oo kale waxaad awoodi doontaa inaad la qabsato dookhaaga iyo baahiyahaaga.
WWDC 2018 Qoraallada Aqoon-isweydaarsiga Hadda Waa La Heli Karaa
Qoraallada dhammaan fiidiyooyinkii aqoon isweydaarsiyada ee la qabtay intii lagu jiray WWDC-dii ugu dambeysay ayaa hadda laga heli karaa websaydhka Apple.
Microsoft waxay qorsheyneysaa inay u sameyso barnaamij iOS ah barnaamijkeeda filinka iyo TV-ga
Microsoft waxay bilaabi kartaa codsi ah adeegyadeeda filimada & TV-ga si dadka isticmaala iOS ay ugu raaxaystaan ​​waxyaabaha ay ka iibsadaan Windows-ka.
Apple ma iibsan doonto 1password
Apple waxay umuuqataa inay diyaar u tahay inay siiso koontada 1password dhammaan shaqaalaheeda si bilaash ah. Laakiin wararka xanta ah ee ku saabsan iibkiisa waa la beeniyay.
Apple waxay lashaqeeyaan Disney si kor loogu qaado ololaha #DreamBigPrincess
Wiilasha Cupertino waxay mar kale xulufada la yihiin Disney si ay ugu sharraxaan olole ay ugu hiilinayaan haweenka hibada maqalka.
IOS 11.4 waxay u daadinayaan batterigaaga iPhone qaab arxan daro ah
Muranku wuu sii socdaa, noocyadii ugu dambeeyay ee iOS, sida iOS 11.4, waxay soo saarayaan tiro wanaagsan oo cabashooyin ah oo ku saabsan ismaamul xumadooda.
Waxaan ku badalay iPhone X-ga phone 50 taleefanka Android waana tan natiijada
Tani waa waxa dhacaya marka isticmaalaha iPhone X uu ku beddelo taleefankiisa casriga ah qalab Android ah oo ku kacaya kaliya 50 euro.
Ladnaansho, xalka ugufiican ee lagu kaban karo feylasha la tirtiray
Haddii kaarka xusuusta, diskiga adag, USB stick ... ay shaqada joojiyeen oo aan dooneyno inaan helno feylasha ay ku jiraan, iyadoo la adeegsanayo 'Recoverit' waa macquul.
Apple wuxuu bilaabay 'Memory', barta cusub ee lagu hormarinayo Aqoonsiga Face-ka ee iPhone X
Ragga ka socda Cupertino waxay rabaan inay sii wadaan dhiirrigelinta Aqoonsiga Wajiga ee iPhone X habka ugu asalka ah ee leh xusuusta cusub.
Astaanta Apple, sheekada quruxda badan iyo sheekada dhabta ah
Sababta sheekooyin badan iyo halyeeyo reer magaal ah, asalka astaanta Apple maahan waxa dad badani haystaan, ama waxa ay dad badani jeclaan lahaayeen inay noqoto.
Apple Music ayaa dhaaftay barnaamijka 'Spotify' ee Mareykanka
Apple Music waxay dhaafi laheyd 20 milyan oo macaamiil gudaha Mareykanka ah, iyagoo kahoreeyay Spotify gudaha wadanka Waqooyiga Ameerika.
Electra iOS 11.3.1 JAILBREAK hadda si rasmi ah ayaa loo heli karaa
Websaydhka rasmiga ah ee CoolStar waa la cusbooneysiiyey waxaanan hadda haysannaa elektaroonigga elektarooniga ah ee loo yaqaan 'Electra iOS 11.3.1' oo la heli karo, kaas oo kuu oggolaanaya inaad jeel ka dhigto iOS 11.2-11.3.1.
Falanqeeyayaashu waxay sharad ku wada galaan dhammaan saddexda muraayadaha ee iPhone-ka
Falanqeeyayaasha ayaa hubaal ah in shirkadda Cupertino ay diyaarinayso terminal leh seddex lenses iyo xoogaa awoodo gaar ah.
Cusbooneysiinta JAILBREAK ee macruufka 11.3.1 ayaa imaan doonta maalmo yar gudahood
CoolStar ayaa ku shaacisay barteeda Twitter-ka inay jiraan maalmo kooban oo ka harsan inta si rasmi ah loo bilaabayo cusbooneysiinta Electra ee iOS 11.3.1.
Sygic wuxuu xaqiijinayaa imaatinkiisa CarPlay oo leh iOS 12
Barnaamijka GPS navigation, Sygic, ayaa horay u sii socda oo muujinaya sida uu ula shaqeyn doono Apple CarPlay cusub iyo iOS 12.
Apple wuxuu diiwaangeliyaa iPad-yada cusub iyo Mac-yada Komishanka Dhaqaalaha ee Eurasia
Apple waxay ka diiwaan galisay moodooyinka cusub ee iPad iyo Mac Komishanka Dhaqaalaha Eurasia, diiwaangelin lama huraan ah si ay ugu awoodaan inay ku iibiyaan Ruushka iyo nawaaxigeeda.
Kuwani waa cayayaanka ay iOS 12 beta 3 hagaajiso
Waxaan tijaabineynaa iOS 12 si aan ugu sheegno gacantaada waxa faa iidooyinkeedu yahay, iyo gaar ahaan khaladaadka ugu badan ee ay yihiin.
Bakhaarka 'App App' ee 'iOS App Store' weli wax badan baa laga faaiiday
Bakhaarka 'App App'-ka 'iOS App Store' ayaa wali aad uga faa'iido badan tartanka, Google Play Store, aad ayeyna u kordheysaa seddex jeer ka badan.
Ma la wadaagtaa koontada Netflix asxaabta? Netflix waxay dooneysaa inay sare u qaado qiimaha qaybteeda 'Premium'
Marka la eego soo dhaweynta weyn ee qorshooyinka qiimaha aaladaha kala duwan, Netflix waxay hadda dooneysaa inay sameyso koror ku saabsan qorshaha u oggolaanaya ilaa afar qalab.
Jeelka CoolStar ee loogu talagalay iOS 11.3.1 wuxuu isku dari doonaa shaandheyn ku saabsan tweaks aan la taageerin
JAILBREAK loogu talagalay iOS 11.3.1 oo uu sii deyn doono hacker-ka CoolStar ayaa soo bandhigi doona waxa uu ugu yeeray Repo-unclutter, oo ah shaandhe isku dheelitiran oo waafaqsan.
Natiijooyinka maaliyadeed ee saddexda bilood ee saddexaad ayaa lagu dhawaaqi doonaa July 31
31-ka Luulyo, Apple wuxuu warbaahinta u shaacin doonaa natiijooyinka dhaqaale ee rubuca saddexaad ee maaliyadeed ee sanadka.
MediaTek wuxuu noqon karaa alaab-qeybiyaha 5G-yada ee iPhone-ka soo socda
Shirkadda Aasiya ee MediaTek, taas oo sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay ee dhowaan ay maamuli doonto soo saarista HomePod iyo kuwa ku shaqeeya ...
Google wuxuu dadka kale u oggolaanayaa inay akhriyaan emaylkaaga Gmail
Warbixin cusub oo lagu daabacay Wall Street Journal ayaa lagu sheegay in shirkadda Google ay u oggolaanayso shirkadaha inay galaan emaylka ay adeegsadaan dadka isticmaala Gmail.
GarageBand waa la cusbooneysiiyay oo hadda wuxuu taageeraa Shaqada Fasalka (Shaqada Dugsiga)
Codsigii ugu dambeeyay ee la cusbooneysiiyey si loo taageero Shaqada Iskuulka waa GarageBand ee Apple.
Bankia iyo Sabadell waxay horeyba ula jaan qaadayeen Apple Pay!
Dhowr saacadood, dhammaan isticmaaleyaasha haysta kaararka deynta iyo kaararka Banc Sabadell iyo Bankia, horeyba ...
Kooxaha hal-dhinac ayaa u yimaada WhatsApp cusbooneysiintii ugu dambeysay
Hadda WhatsApp wuxuu oggol yahay abuuritaanka kooxo hal dhinac ah oo kaliya maamulayaasha wax ku qori karaan.
Aasaasayaasha Beats Electronics ayaa lagu amray inay siiyaan 25 milyan oo doolar Steve Lamar, oo kaqeyb qaatay naqshaddii Beats Studio asal ahaan
Borotokoolka amniga ee isku xirka aaladaha shabakadaha Wi-Fi waxaa lagu magacaabaa WPA3 wuxuuna arki doonaa iftiinka maalinta ee 2019, oo leh astaamo badan oo nabadgelyo oo cusub.
Tani waxay noqon kartaa xeedho 18W USB-C ah oo Apple iibin doonto
Xarkaha USB-C ee lagu muujiyey ubaxa wuxuu noqon karaa adabtaraha 18W ee Apple qorsheyneyso inay dhowaan soo bandhigto.
macruufka 11 weli nool: Apple wuxuu sii daayaa macruufka 5 Beta 11.4.1
Apple wuxuu sii wadaa inuu hagaajiyo macruufka 11 iyo macOS High Sierra adoo sii deynaya beta-ka shanaad ee iOS 11.4.1 iyo macOS 10.13.6 kuwa horumariya maanta.
IPhone-ka 2018-ka wuxuu yeelan karaa 4GB oo RAM ah
Xilligan xagaaga, dareeraha cusub ee Apple soo bandhigi doono, sadaasha ahaan, bisha Sebtembar, waa inay horeyba ugu jiraan wejiyada ugu dambeeya ee baaritaanka.
Drake wuxuu jabiyaa rikoodhada gaaraya 170 milyan oo aragtiyo ah Scorpion oo ku saabsan Apple Music
Farshaxaniistaha caanka ah ee Drake ayaa jabiya diiwaanada isaga oo hagaajinaya xogta qulqulka ee albumkiisa cusub ee loo yaqaan 'Scorpion' marka loo barbar dhigo midkiisii ​​hore.
Kuwani waa saadaalinta Ming-Chi Kuo ee alaabada cusub ee Apple
Ming-Chi Kuo waxay soo saartay saadaal taxane ah oo ku saabsan alaabooyinka cusub ee Apple ee dhamaadka sanadka iyo bilowga sanadka soo socda.
LG wuxuu mar kale u shaqeynayaa sidii soo saare shaashadda iPhone-ka
Ku dhowaad bilowga cusub, falanqeeyayaashu waxay mar kale tilmaamayaan LG inay tahay soo saaraha shaashadaha iPhone-ka mustaqbalka leh teknolojiyadda OLED.
Darajooyinka xidhitaanka: Apple iyo Samsung waxay heshiis ka gaadheen shatiyada
Toddoba sano labada shirkadood waxay ku lug lahaayeen khilaaf sharciyeed ugu dambeyntiina waxay u muuqataa inaysan ka fogeyn ...
Alto's Odyssey iibkiisa waqti xaddidan
Alto's Odyssey waxaa laga heli karaa Stor Econ App qiimo jaban oo 60% ah sicirkiisa asalka ah, laakiin wuxuu socon doonaa waqti gaaban.
Logitech Slim Combo iyo Slim Folio, horeyba ula jaanqaaday iPad 2018
Logitech waxay soo bandhigtay noocyadeeda cusboonaysiinta ee Smart Combo iyo Smart Folio, laba teebabka ku habboon iPad-ka 2017 iyo 2018
Instagram waxay soo bandhigeysaa istiikarada muusikada si aan ugu darno Sheekooyinkeena
Hadda waxaan ku dari karnaa muusikada Sheekooyinkeenna 'Instagram' imaatinka astaamaha muusikada cusub ee Instagram ay hadda billowday.
Fikradda xiisaha leh ee iPad Pro oo leh jajabyo yaraaday iyo geesaha shaashadda wareega
Waxaan ku tusineynaa fikrad cusub oo ah 11,9-inji iPad Pro, oo leh jaantusyo hoos u dhacaya isla markaana ku fadhiya cabir la mid ah qaabka 10,5-inji
Telegram waa la cusbooneysiiyay waxayna noo ogolaaneysaa inaan calaamadeysno farriimaha koox sida akhrinta ah
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Telegram waxay noo ogolaaneysaa inaan si deg deg ah u calaamadeyno fariimaha aan la aqrinin si toos ah qolka sheekada, adigoon marin gudaha
Apple wuxuu ku bilaabi lahaa taxane, muusig iyo qorshe warar hal rukun ah
Apple waxay bilaabi kartaa hal mar oo lacag ah TV-ga, muusigga iyo adeegyada wararka, iyadoo hal bil laga qaadayo
Elgato waxaa loo magacaabay Eve System waxayna iibisaa qaybteeda “ciyaaraha”
Elgato hadda waxaa loo yaqaan Eve System oo magaca beddelkiisu wuxuu keenayaa iibinta qaybteeda "ciyaaraha".
Ma leedahay runti dalwad ah kanaal YouTube ah? Apple ayaa saxiixaya tayadan
Xaqiiqda dhabta ah waxay sii waddaa inay tahay hab xiiso leh oo Apple u sahmin karto waana tan marka lagu daro xaqiiqda la kordhiyay ...
Instagram waxay soo bandhigeysaa wicitaanada fiidiyowga kooxeed ee cusub codsigooda
Instagram ayaa dib u habeyn ku sameysay qeybteeda Baadhitaanka waxaana ku jira wicitaano fiidiyoow ah oo toos ah, si dadka isticmaala aysan ugu xirnaan barnaamijyada kale.
Shaqada Iskuulka ee Apple ayaa si rasmi ah loo heli karaa
Shaqada iskuulka ayaa loo heli karaa iskuulada iyo macalimiinta si ay ugu abaabulaan aaladaha iOS.
Playz, abka cusub si loo helo dhammaan waxyaabaha madasha ka kooban
Playz waa barnaamijka cusub si aad ugu raaxeysan karto waxyaabaha ka kooban madal dhan iPhone iyo iPad meelkasta
Spark waxaa lagu cusbooneysiiyay dagaalka hagaajinta iyo wararka yar
Spark, mid ka mid ah maareeyayaasha emaylka ugu caansan ee la yimaada wararka iyo gaar ahaan horumarin badan.
Amazon waxay dhaaftay Apple sida ugu qiimaha badan
Shirkadda weyn ee iibka ee 'Internet', 'Amazon', waa shirkadda ugu qiimaha badan Mareykanka, oo ka sarreysa dhammaan awoodda Apple iyo Google ee ku dhaca 2 boos.
Shirka shirkadaha tiknoolajiyada waaweyn si wax looga qabto arrimaha khuseeya arrimaha gaarka ah
Shirkadaha waaweyn ee tikniyoolajiyadda ayaa kulmi doona Arbacada soo socota si ay ugala hadlaan arrin aad muhiim u ah bilihii la soo dhaafay: asturnaanta isticmaalaha.
Xayeysiis macsalaameyn, Microsoft Edge oo loogu talagalay macruufka waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu daray Adblock Plus
Ragga Microsoft waxay ku daraan Adblocker Plus xiiso badan Microsoft Edge ee iOS si aan u ilaawno xayeysiinta internetka.
IPhone Error 53 wuxuu ku kacayaa Apple gudaha Australia $ 9 milyan
Jacaylka Apple ee soo bandhigida software-ka xannibaya isbeddelada ay ku sameeyeen aaladda aqoon-isweydaarsi aan la oggolaan ayaa ku kacay $ 9 milyan oo ganaax ah oo Australia ah.
Furitaanka iyo ka bilaabida gaarigaaga iPhone-ka waxay ku dhowdahay inay run noqoto
Taxane qeexitaanno cusub ayaa la daabacay oo ku saabsan nidaamka furaha dhijitaalka ah ee casriga ah ee Apple leedahay.
Waxay muujinayaan sida loo furo iPhone-ka lambar koodh ah iyada oo loo marayo xoog caayaan
Falanqeeye amniga ayaa muujiyey inay awood u leedahay inay furato iPhone-ka lambar sir ah iyadoo loo marayo nidaamka xoogga caayaan.
Tani waxay noqon kartaa iPhone SE-ka qiimaha jaban ee Apple soo bandhigi laheyd sanadkan 2018
Waxaan mar kale aragnaa wararka xanta ah ee soo socda ee iPhone SE, Apple-ka qiimaha jaban ee Apple ee ku imaan doona 6.1 inji, iyo heerka caanka ah ee iPhone X.
Amazon waxay ka bilaabeysaa barnaamijka akhriska caruurta ee Amazon FreeTime Unlimited adeegsiga iOS
Ragga ku jira Amazon ugu dambeyntii waxay ku dhiirranayaan inay soo bandhigaan buugooda waxyaabaha carruurtu ka kooban tahay, Amazon FreeTime Unlimited, oo ku saabsan iOS si ay uga helaan iDevice kasta.
9 × 36 Podcast: Xiritaanka Xilliga
Waxaan ku xireynaa xilli-ciyaareedkii ugu dambeeyay ee aan ku falanqeyneyno wax walba oo dhacay sannadkan, kan ugu fiican uguna xun Apple
Foxconn waxay ka furi doontaa xarumaheeda ugu horeeya dalka Mareykanka
Tan iyo markii Donald Trump uu yahay madaxweynaha, xiriirka Apple iyo Foxconn waxay soo mareen gobollo kala duwan sababo la xiriira ...
Marka laga tago wararka xanta ah: Apple kuma midoobi doono macruufka macOS
Apple kumuu midoobi doono macruufka macOS, laakiin waxay ka caawin doontaa horumariyeyaashu inay barnaamijyadooda macruufka ah ugu gudbiyaan barnaamijyada macOS mashruuc sannadka dambe.
Carruurta isticmaasha samaacadaha dhagaha waxaa ku dhici kara maqal la'aan
Caruurta isticmaasha samaacadaha dhagaha waxay halis sare ugu jiraan maqal la'aanta kuwa aan sida joogtada ah u isticmaalin.
Kuwa ku hadla caqliga wali ma dhex galaan HomeKit
Daraasadihii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in kaliya 6% dadka isticmaala ku hadla caqliga ay ka faa'iideystaan ​​iyaga si ay u maareeyaan nidaamka otomatiga guriga.
App-ka cusub ee Walkie-Talkie wuxuu u yimaadaa Apple Watch oo leh watchOS 5 Beta 2
Daahfurka beta labaad ee watchOS 5 wuxuu noo keenayaa codsigii Walkie-Talkie ee mudada dheer la sugayay kaasoo u badalaya Apple Watch-geena Walkie-Talkie
Dhammaan isbeddelada ka yimaada iOS 12 Beta 2
Apple waxay sii deysay iOS 12 Beta 2 waxaanan ku tusinaynaa dhammaan isbeddelada iyo hagaajinta ay ku codsatay cusbooneysiintan cusub ee iPhone iyo iPad
HBO waxay layaab ku noqotay iyadoo soo saaraysa ciyaarta rasmiga ah ee Westworld ee loogu talagalay macruufka, ciyaar aan kula wareegi doonno maamulka iyo maareynta baarkinka caanka ah ee Westworld.
Imaginbank iyo Bankia waxaa lagu cusbooneysiiyay warar muhiim ah
Nala baro nala soo socodsiinta waa maxay tabo cusub oo ay keeneen cusbooneysiintii ugu dambeysay ee laga sameeyay ImaginBank iyo Bankia.
IOS waxay u diri doontaa goobta wicitaanada 911 ee Mareykanka
Dheeraadkan muhiimka ah wuxuu gacan ka geysan doonaa hagaajinta awoodaha badbaadinta iyo samatabbixinta dadka halista degdegga ah ku jira.
Sidee Apple u soo bandhigi doontaa waxyaabaha ay ka kooban tahay ee maqalka ah?
Apple waxay ku soo bandhigi kartaa nuxurka maqalka ee asalka ah laba siyaabood: rukhsad gooni ah ama xirmo leh adeegyo kale sida Apple Music.
Apple wuxuu ballaariyaa tirada maareeyayaasha adeegga fiidiyowga ee soo dejinaya
Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa kiraysatay Kelly Costello si ay ula wareegto ganacsiga caalamiga ah ee barnaamijka fiidiyoowga ee Apple.
Waxaan tijaabinay Xtorm SolarBooster, isticmaal tamarta qorraxda si aad ugu dalacdo aaladahaaga
Waxaan tijaabinay hawlgalka qoraxda Xtorm SolarBooster, oo ah mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo iftiinka qoraxda isla markaana lacag looga qaadi karo iDevices-ka.
Apple waxay kireysataa mid ka mid ah madaxda nidaamka iswada gaar u socodka ee Google ee loo yaqaan Waymo
Sanadihii la soo dhaafay, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay ogtahay inaysan sii wadi karin inay ku noolaato ka-tiirsanaanta iPhone, a ...
Apple waxay cusbooneysiineysaa qaybta amarada khadka tooska ah laga helo websaydhkeeda rasmiga ah
Big Apple wuxuu cusbooneysiiyay degelkiisa rasmiga ah halkaas oo aan ku maamuli karno amarrada internetka oo leh sawirro waaweyn iyo muuqaal casri ah.
watchOS 5 ayaa u oggolaan doonta barnaamijyada Podcasts ee Apple Watch
Iyadoo watchOS 5 Apple ay siisay horumariyayaashu awood ay ku abuurtaan codsiyo si buuxda u shaqeeya oo Podcast ah oo ku saabsan Apple Watch.
"Ku soo dhawow HomePod" ayaa ku guuleysta abaalmarinta xayeysiinta ugu fiican
Spike Jonze wuxuu ahaa agaasimaha "Welcome HomePod", xayeysiiska Apple ee la siiyay ganacsiga ugu fiican.
Oprah Winfrey ayaa kubiirtay Apple si ay u sameyso barnaamijyo telefishan
Telefishanka martida loo yahay Oprah Winfrey ayaa u saxeexday adeegga fiidiyowga ee soo dejinta Apple.
Tim Cook wuxuu yiri shaqada fadhiga waa "kansarka cusub"
Shaqaalaha Apple Park waa inay la shaqeeyaan iyagoo istaagaya muddo gaaban oo fadhiya, sidan ayuu Tim Cook u rumeysan yahay inay horumarinayaan tayada noloshooda.
Apple wuxuu u saxiixay Aaron Paul (Breaking Bad) taxanaha Ma huruddaa?
Ma huruddaa? ayaa mid ka mid ah jilayaasha ka heleysa Breaking Bad Aaron Aaron Paul wuxuu ku lahaan doonaa shaqaalihiisa.
Apple wuxuu ku soo laabtay sharadka Mac oo leh dhibco cusub
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen olole ad xayeysiis ah oo ku saabsan sida isticmaalayaasha Mac ay ugu abuuraan waxyaabo yaab leh macs.
IOS 11.4 JAILBREAK on video la Cydia socda
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in JAILBREAK loogu talagalay iOS 11.4 ay noqon karto meel u dhow, haddii cilmibaaraha amniga uu la wadaago ka faa'iideysiga la isticmaalay
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Khariidadaha Google waxay ku xallineysaa dhibaatada iOS 12
Kadib cusbooneysiinti ugu dambeysay, Khariidadaha Google ayaa xaliyay dhibaatada goobta GPS wuxuuna hadda si buuxda ula jaan qaadayaa macruufka 12 ee beta-keedii ugu horreeyay.
watchOS 5 waxay kuu ogolaaneysaa inaad gacanta ku dhigto isku xirka Wi-Fi
Marka la eego watchOS 5 waxaan sidoo kale boos u leenahay wixii ku cusub watchOS 5, oo hadda ku daraya dejinta isku xirka Wi-Fi.
Foornada loogu talagalay macruufka ayaa maamusha in ka badan 125 milyan oo isticmaaleyaal ah
Ciyaaraha Epic ayaa hada ku dhawaaqay imaatinka 125 milyan oo ciyaartoy ah Fortnite. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku dhawaaqeen Koobka Adduunka ee Fortnite.
Apple mar kale waxay ka faa'iideysaneysaa dabaaldega Koobka Adduunka ee soo socota iyadoo ku dareysa waxyaabo gaar ah Siri iyo adeegyadeeda dijitaalka ah.
Waxaan booqaneynaa waxoogaa yar oo safar ah dhamaan wararka buugaagta ay keeneen macruufka 12 iyo wixii ka sareeya dhamaantood wax yar ayaan ka hadalnaa waxa ay dhab ahaan ula jeedaan.
Apple waxay ka saari doontaa codsiyada App Store-ka codsanaya helitaanka xiriirada
Apple marwalba way ku adkeysaneysaa arinta, waxay ka saari doontaa App Store barnaamijyadaas oo si aan macquul ahayn u adeegsada helitaanka xiriirada.
Nomad wuxuu soo bandhigayaa Batrool la qaadan karo oo ah 2.800 mAh si loogu soo oogo iPhone
Soo saaraha baytariyada la qaadan karo Nomad wuxuu soo bandhigayaa batari dib loo soo celin karo si uu ugu xiro iPhone-ka fiilada danab isku dhafan
Microsoft waxay la yaabtay oo ay soo bandhigi doontaa halyeeyga Gears of War ee iPhone
Ragga ka socda Microsoft waxay la yaabeen E3 iyagoo soo bandhigaya Gears of War aaladaha moobaylka ee ay ciyaaraan tirooyinka POP, Gears POP!
Ogeysiis cusub oo ku saabsan qayb kale oo ka mid ah Carpool Karaoke
Apple waxay daabacday fiidiyoow saacado kahor kahor oo leh qayb kale oo cusub oo ka mid ah taxanaha caanka ah ee Carpool Karaoke. Qeybahaani oo ...
Sonos Beam, barxad dhawaaq leh oo leh Alexa iyo AirPlay 2
Shirkaddu waxay sii wadaa inay soo bandhigto astaamo cusub sida baarkan dhawaaqa cusub ee isku xiraya Alexa iyo AirPlay 2, ma Sonos Beam, ayaa ugu fiican suuqa?
Apple waxay qaadaysaa taxaddarro, warshado hoos udhacay 20% sanadkan
Apple waxay qaadaysaa taxaddarro waxayna go'aansatay inay warshaduhu ka dhigaan wax ka yar 20% sanadkii la soo dhaafay xilligan si aan loogu badin wax soo saarka.
LaLiga waxay aqoonsan tahay in barnaamijkeeda rasmiga ahi ku basaaso adiga
Ragga ka socda LaLiga waxay qirayaan inay u adeegsadaan barnaamijka rasmiga ah ee qalabka mobilada inay ku soo ururiyaan macluumaadka ku saabsan baararka aan bixin shatiga.
Apple wuxuu dib u bilaabayaa watchOS 5 Beta 1
Toddobaad ka dib Apple waxay dib u soo celineysaa Beta-dii ugu horreysay ee watchOS 5 oo leh dhammaan sheekooyinkeeda cusub sida codsiyada Podcasts ama shaqada Walkie Talkie
IOS 12 waxay kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho xulashada kiiboodhka saxda ah aaladaha aan laheyn 3D Touch
Hadda waa suurtagal mahadsanid macruufka 12 si loo isticmaalo xulashada kumbuyuutarka saxda ah xitaa nidaamyada ka maqan tiknoolajiyada 3D Touch.
IOS 12 waxay kuu ogolaaneysaa inaad xirto barnaamijyada waxqabadka badan ee iPhone X adigoo riixaya, sida qalabka kale
Ka shaqeynta badan ee iPhone X had iyo jeer way ka yara duwan tahay qalabka kale ee iOS. Iyadoo iOS 12 Apple ay tan wax ka beddeshay.
tvOS 12 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad lambarka sirta ah ka soo gasho iPhone-kaaga
Waxyaabaha cusub ee tvOS 12 ayaa ah inaan ka gali karno furaha sirta ah iphone-keena isla markaana aan iska iloobi karno kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee Apple TV.
Ka dib raadkii iPhone 7, xanta ugu horeysa waxay soo jeedineysaa in Apple Watch soo socota ay ka tagi doonto badhamada jirka si ay ugu furato badhano adag.
Albaabkii ugu dambeeyay ee Shawn Mendes ayaa ku jira sida Apple Music loogu dhageysiga badan yahay 2018
Shawn Mendes ayaa sii daayay cinwaankiisii ​​ugu dambeeyay toddobaadyo ka hor. Waqtigan gaaban wuxuu noqday albumka loogu dhageysiga badan yahay 2018 ee Apple Music.
Maqnaanshaha warka ku jira AirPods, Apple wuxuu u soo bandhigayaa midabyo cusub Beats Solo3 iyo Powerbeats 3
Adigoon cidna fileynin, Apple waxay cusbooneysiisaa kala duwanaanta midabka Beats Solo3 Wireless iyo Powerbeats3 Wireless sidaa darteed waxaan nahay kuwa ugu qabow xagaaga.
IOS 12 waxay joojisaa marin u helka USB-ga haddii iPhone-keena aanu quful ku xirnayn saacad gudaheed
IOS 12 waxay noo ogolaaneysaa inaan joojino wada xiriirka iPhone-ka iyada oo loo marayo xiriirka danabka, si looga hortago aaladaha sida GrayKey inay marin ka helaan bartayada.
Microsoft waxay ku iibsaneysaa barnaamijka GitHub $ 7.500 bilyan
Madxafka ugu isticmaalka badan adduunka, GitHub, ayaa kamid noqday shirkadda weyn ee Microsoft kadib markii ay bixiyeen 7.500 bilyan oo doolar.
Noocyada tijaabada ah waxay u yimaadaan dhammaan codsiyada App Store
Apple waxay cusbooneysiineysaa hagaha adeegsiga App Store oo u oggolaanaya dhammaan horumariyeyaashu inay bixiyaan xilliyada tijaabada ee codsiyadooda si aan u tijaabin karno iyadoon wax xannibaad ah ka hor intaadan aadin goobta wax lagu iibsado.
Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa lagu qasbay inay ka noqoto beta-kii ugu horreeyay ee daawashada 5, sababo la xiriira dhibaatooyinka ay soo bandhigto markay ku rakibayso aalado is-waafaqsan.
Haddii aadan fursad u helin inaad aragto qodobka WWDC 2018 ee isniinta, waxaad horeyba fursad ugu heshay inaad dib ugu noolaato bogga rasmiga ah ee Apple.
Apple Music waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka heshid muusikada ereyadeeda ku jira iOS 12
In beta-kii ugu horreeyay ee macruufka 12 ee soo-saareyaasha waxaa suurtagal ah in laga helo heesaha Apple Music ereyadooda. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan u helno hal weedh dhammaan heesaha aan ka garaneyno oo aan ahayn magaceeda oo buuxa.
WWDC 2018 hadda waxaa laga heli karaa YouTube
Fiidiyowga shirkii furitaanka ee WWDC 2018, oo dhacay Isniintii, Juun 4, ayaa hadda laga heli karaa YouTube.
watchOS 5 lama jaan qaadi karto jiilka koowaad ee Apple Watch
Jiilka koowaad ee Apple Watch ma la jaan qaadi doono watchOS 5. Tan waxaa Apple ku xaqiijisay websaydhkeeda rasmiga ah ka dib WWDC 2018 nuxurka.
Aqoonsiga wajiga ee iOS 12 wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iska diiwaangeliso muuqaal labaad, ma ahan weji labaad
Muuqaal cusub oo ku saabsan iOs 12 wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iska diiwaangeliso muuqaal kale oo loogu talagalay Aqoonsiga Aqoonsiga, halkii aad ku dari lahayd wejiga labaad si aad u furto qalabka.
Kuwani waa Macs la jaan qaadi kara macOS Mojave
Tani waa liiska Mac-yada ee macOS Mojave uu aqbalo ka dib markii lagu dhawaaqay WWDC 2018 oo dhacay shalay. Dhawr Macs oo iswaafajiya High Sierra ayaa ka tuuraya liiska Mojave.
Podcast 9 × 34: macruufka 12 iyo inbadan oo dheeri ah
Kadib khudbada bandhigga waxaan falanqeyneynaa dhammaan wararka Apple na tusay WWDC18, oo leh iOS 12 hogaamiyaha
Iyadoo la eegayo iPad-ka soo socda iyada oo aan loox lahayn, macruufka 12 wuxuu keenayaa astaamaha iPhone X-ga iPad-ka
IOS 12 waxay fureysaa tilmaamo cusub oo ku saabsan ipad-yadayada laga dhaxlay astaamaha cusub ee iPhone X keenay sababo la xiriira tirtiridda muraayadaha iyo ku darista qormooyinka.
Kuwani waa barnaamijyada guuleysta ee Abaalmarinta Naqshadeynta Apple 2018
Kuwani waa tobanka codsi ee ay Apple ku abaal marisay abaalmarinteeda Apple Design Awards 2018 kal-fadhigii ugu horreeyay ee WWDC. Soo-saareyaasheeda ayaa guriga geeya xirmo badan oo ah tufaax.
macOS Mojave: waa wararka aadan seegi karin
Nidaamka cusub ee hawlgalka ee loo yaqaan 'Macs' waxaa loo yaqaan macOS Mojave. Apple waxay isku dayday inay dib u naqshadeyso xoogaa nidaamka ah oo ay siiso amaan badan xogta isticmaale.
Dhamaan wararka ku jira iOS 12
Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan wararka ka iman doona gacanta iOS 12, hoosta waxaan ku tuseynaa wararka ugu muhiimsan ee ka imaan doona gacanta nooca ugu dambeeya ee iOS 12 bisha Sebtember.
Gurigu wuxuu u yimaadaa Mac-ga macOS Mojave
Ugu dambeyntii, otomaatiga guriga Apple wuxuu yimaadaa Mac, halkaas oo aan ka koontarooli karno gurigeenna barnaamijka cusub ee Home-ka ee macOS.
Dhamaan wararka ku jira watchOS 5
Apple waxay soo bandhigtay watchOS 5 oo loogu talagalay Apple Watch ee WWDC waana kuwan oo dhan wararka ay cusbooneysiintu keeni doonto.
Apple TV 4K waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo Dolby Atmos
Suurtagalnimada abuurista dhawaaqa hareeraha leh TV-ga Apple TV ayaa yimid mahadnaqa imaatinka tikniyoolajiyadda Dolby Atmos ee TV-ga Apple TV.
Apple Podcasts ayaa ugu dambeyn imanaya Apple Watch
Apple waxay go'aansatay inay ku darto barnaamijka Podcast ee aadka loo dalbaday ee Apple Watch, mar dambe ma adeegsanayso iPhone si loogu ciyaaro Podcasts-ka aan jecel nahay.
MeMoji, u rogo Animoji mahadsanidiisa cusub ee iOS 12
iOS 12 waxay noo ogolaan doontaa inaan noqono Animoji u gaar ah mahadnaqa MeMoji cusub, jilayaal muuqaal leh muuqaalkeena.
Khariidadaha Google ayaa imanaya CarPlay oo wata iOS 12
Apple waxay soo bandhigtay iOS 12 oo ah WWDC waxayna ka buuxsantaa warar ku saabsan nidaamkan cusub ee iPhone ka shaqeeya, ...
macruufka 12 wuxuu noo keenayaa Ha Dhibin intaan hurdada ku jiro
Habka Ha Rabin ayaa la cusbooneysiiyaa iyadoo lagu darayo suurtagalnimada in aan u qaabeyno iyadoo la raacayo saacadaha aan si toos ah u seexanno.
Gawaarida loo maro Siri ayaa yimid, awood u lahaanshaha isku xirka codsiyada weedho horudhac ah
Siri wuu sii gaboobayaa iyadoo la adeegsanayo macruufka 12 ee noo ogolaanaya inaan ku keydinno dariiqyada dariiqooyinka dhexdooda weedho si Siri ay noo xasuusiso macluumaadka aan kaydinay.
Cabir, barnaamijka cusub ee Apple si loo cabbiro
Apple ayaa hadda soo bandhigtay barnaamij cusub oo loogu talagalay iOS 12, Measure, oo ka socda WWDC. Abku wuxuu ballanqaadayaa inuu si fudud oo kalsooni leh u cabbiro adduunka inagu xeeran.
IOS 12 waxay la jaan qaadi doontaa isla aaladaha sida iOS 11
Haa, macruufka cusub ee 12 wuxuu noqon doonaa mid la jaan qaada dhammaan aaladaha uu iOS 11 la jaan qaadi karay, nidaamka qalliinka ee aaladaha badankood la jaan qaadayaan.
Kuwani waa qaar ka mid ah emoticons-ka cusub ee imaan doona dhammaadka sannadkan taleefanka iPhone-ka
Sanadihii la soo dhaafay, isticmaalka emoticons-ka ayaa noqday mid ka badan sidii caadiga ahayd waqtigaas ...
Ciyaaryahanka webka ee Apple Music wuxuu noo ogolaanayaa inaan galno xogteena si aan u dhageysano muusigayga
Apple waxay ka shaqeyneysaa web player kaasoo noo ogolaanaya inaan marino akoonkeena Apple Music anaga oo aan isticmaalin iTunes waqti kasta, markaan ku jirno Mac-geena.
Dhowr saacadood ka hor WWDC, Apple wuxuu ku soo laabanayaa meel kale oo leh Animoji Karaoke
Mashiinnada suuqgeynta ee Apple waxay bilaabeen inay kululeeyaan saacado ka hor WWDC ee soo socota ee furitaanka Muhiim ah oo leh meel cusub oo ay ku jiraan Animoji oo ah jilaayaal.
Raac soo bandhigga macruufka 12 toos ula wadaag Actualidad iPhone
Apple waxay na soo bandhigeysaa Isniinta maanta cusub ee iOS 12 oo ay weheliso inta kale ee cusbooneysiinta dhammaan qalabkeeda WWDC 2018 waxaanan kuu sheegi doonaa wax walba oo nool. Halkan kala soco.
Telegram wuxuu bilaabaa inuu cusbooneysiiyo ka dib go'doominta Apple codsi Ruush ah
Telegram, oo ah adeegga fariimaha deg degga ah, ayaa waxaa cusbooneysiin ku sameeyay App Store sababo la xiriira dhibaatada dowladda Ruushka oo weydiisatay furayaasha si ay u khaldo wadahadallada adeegga.
CoolStar wuxuu cusbooneysiin doonaa Electra si loo xiro macruufka 11.3.1
JAILBREAK loogu talagalay macruufka 11.3.1 wuu ka dhow yahay sida aan filayno. Ka dib markii lagu dhawaaqay ka faa'iideysiga cusub ee Ian Beer, Hackers-ka CoolStar wuxuu xaqiijiyay inuu cusbooneysiin doono qalabkiisa Electra si uu u rakibo Cydia.
Apple si loo ballaariyo awoodaha Siri ee WWDC
WWDC 2018 waxaan ku arki doonaa horumar aan caadi aheyn kaaliyaha caaqilka ee Apple: Siri. Filo inaad aragto kaaliyaha is dhexgalka Beats ku hadla, hagaajinta wada hadalka kaaliyaha, iyo hagaajinta HomePod.
AirPlay 2 Ku hadla Iswaafajin
Ragga ka socda Cupertino waxay awood u yeesheen qayb cusub oo boggooda ah, halkaas oo aan ku arki karno dhammaan moodooyinka la jaan qaadi kara AirPlay 2.
Hadda waxaad ka heli kartaa saldhigyada cusub ee lacag-bixinta wireless-ka Belkin
Belking waxay rajeyneysaa bilawga suurtagalka ah ee Apple's AirPower iyadoo la bilaabayo deked lacag la'aan ah iyo sariir loogu talagalay iPhone 8 iyo iPhone X.
Apple wuxuu bilaabaa qurxinta San Conse Center for WWDC
Big Apple wuxuu geeyay gabi ahaanba qalabkiisa qurxinta ee Xarunta Shirarka McEnery ee San José, halkaas oo lagu qaban doono WWDC 2018. Isniinta soo socota waxaan ogaan doonaa dhamaan wararka ku saabsan nidaamyadeeda shaqo.
Eve Aqua iyo Eve Flare, kii ugu dambeeyay ee laga soo qaado elgato ee loogu talagalay HomeKit
Elgato waxay soo bandhigtaa laba qalab oo cusub oo loogu talagalay HomeKit: Eve Aqua, si loo xakameeyo waraabka iyo Eve Flare, laambad kubbadeed.
Firefox waxay noo ogolaaneysaa inaan soo dejino nooc kasta oo ka kooban oo aan la wadaagno barnaamijyada kale, ka dib cusbooneysiintii ugu dambeysay
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Firefox waxay ugu dambeyntii noo ogolaaneysaa inaan kala soo baxno nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha ku jira internetka qalabkeena kadibna aan ku furno arjiga aan rabno.
Iyadoo la tixgelinayo in la ballaariyo Apple Pay Cash, ragga WhatsApp waxay isku diyaarinayaan inay ka bilaabaan adeeggooda macaamil lacageed macaamiishooda dhexdooda.
Kaliya 24 saacadood ka dib markii la bilaabay iOS 11.4 oo leh AirPlay 2 iyo Farriimaha ku jira iCloud oo ah halyeeyada ugu muhiimsan, Apple ayaa bilaabay beta-kii ugu horreeyay ee iOS 11.4.1
Tani waxay noqon doontaa qaybta loogu talagalay LGTB Pride ee Apple ay soo saari doonto Isniinta soo socota
Apple wuxuu qarinayaa goob cusub oo lagu xusayo hanka LGTB ee watchOS 4.3.1 cusub, wuxuuna bilaabi doonaa 4-ta Juun ka dib WWDC Keynote.
Codsiga rasmiga ah ee lagu raacayo WWDC 2018 hadda waa la heli karaa
Apple waxay soo saartay cusbooneysiinta barnaamijka WWDC si ay ula socoto dhammaan macluumaadka iyo walxaha daabacaddan cusub ee shir sannadeedkeeda loogu talagalay horumarinta.
Apple wuxuu sii daayaa watchOS 4.3.1 hagaajinta dhibaatada tufaaxa markii dib loo bilaabayo
Apple waxay umuuqataa inay xalisay dhibaatadii saameysay qaar kamid ah Apple Watch oo ku xayirmay tufaaxa markii dib loo bilaabayay
Waxaan tijaabinay Sandmarc qalabkiisa muraayadaha indhaha, isagoo riixaya kamaraddeena iPhone illaa xadka
Waxaan falanqeyneynaa qalabka cusub ee Sandmarc lenses ee iPhone X iyo iPhone 8, fursado cusub oo riixaya kaamirooyinka iDevices-ka illaa xadka.
Muraayadda seddex-geesoodka ah ee soo socota ee iPhone waxay lahaan doontaa howlo 3D ah oo si fiican u Siin doona
IPhone-ka 2019-ka wuxuu ku dari karaa sedex muraayadood oo kaamiro ah oo ka shaqeyn kara 3D marka lagu daro hagaajinta qabashada iyadoo lagu dhaweynayo ilaa 3x.
TSMC wuxuu bilaabaa inuu soo saaro jajabyada A12 ee qaadi doona Apple iPhones cusub
TSMC waxay bilawday soosaarid farabadan oo ah jajabyada A12 ee qaadi doona iPhone-yada waaweyn ee Apple ee soo socda. Processor-ka cusub wuxuu noqonayaa 7 nanometer, kaas oo u ogolaanaya meel badan oo gudaha ah isla markaana kordhin doona awooda qalabka.
Jaamacadda Seattle waxay yeelan doontaa Apple Store u gaar ah dhismahana si wanaagsan ayuu u socdaa
Sawir cusub oo ay ku dusisay shabaqa shirkadda Reddit, ayaa muujinaya heerka uu haatan marayo dukaankan cusub ee ay Apple ka furi doonto gudaha ...
Liiska liiska loogu talagalay Primavera Sound 2018 ayaa hadda laga heli karaa Apple Music
Haddii aad aadeyso Primavera Sound 2018 nasiib ayaad ku jirtaa tan iyo markii Apple Music ay sameysay liis ay ku qoran yihiin heeso badan oo ka ciyaari doona usbuucaas magaalada Barcelona.
IOS 12 waxay ballaarin kartaa fursadaha NFC chip ee iPhone-ka
Marka aan nahay WWDC waxaan arki doonnaa soo bandhigida macruufka 12. Macluumaadka ugu dambeeyay wuxuu soo jeedinayaa in Apple ay ogolaaneyso in la balaariyo isticmaalka qalabka NFC oo hada leh tiro aad u tiro badan oo terminals ah si ay howlo badan u qabtaan.
Uruurinta tobanka sano ee Beats, Beats-ka cusub ee WWDC 2018, waa la sifeeyey
Dhowr maalmood ka hor Xusidda Muhiimka ah ee xigta ee WWDC 2018, aaladda ugu horreysa ee Apple soo bandhigi doonto waa la sifeeyey: aruurinta tobanka sano ee Beats cusub, oo ah nuqul gaar ah oo loogu talagalay halyeyada dhagaha dhagaha.
Sida loo daawado finalka Champions League (Real Madrid vs Liverpool) oo bilaash ah iphone-kaaga
Waxaan kuu sheegeynaa sida loo daawado finalka UEFA Champions League ee u dhexeeya Real Madrid iyo Liverpool. Finalka waxaa la ciyaarayaa Sabtida, May 26 markay tahay 20:45 pm.
Mashruuca "Star": kumbuyuutar leh shaashad taabasho iyo processor ARM
Mashruuca qarsoodiga ah ee Apple, oo lagu magacaabo Star, ayaa la shaaciyay, kaas oo noqon kara kumbuyuutarka isku dhafan ee aan ka hadlaynay bilaha
Snapchat wuxuu bilaabayaa ikhtiyaar uu kula wadaago goobtaada waqtiga dhabta ah
Ikhtiyaarka ah in lala wadaago goobtaada waqtiga dhabta ah ee shabakadda bulshada ee 'Snapchat' ayaa horayba looga heli karaa waddamada qaarkood. Bilaha soo socda shaqadan waxay ku fidin doontaa juqraafi ahaan illaa ay ka gaarto dhammaan meelaha uu ka shaqeeyo barnaamijka.
Amazon Echo ayaa mar kale qasan, ama sida asturnaanta looga baahan yahay wax walba
Amazon Echo ayaa mar kale dib u qarisa iyada oo muujineysa in asturnaanta adeegsadayaasheeda ay ka fog tahay in loo tixgeliyo inay damaanad qaadayaan marka ay dirayaan wadahadal oggolaansho la'aan.
Apple wuu ogaa dhibaatooyinka "Bendgate" iyo "Cudurka taabashada" muddo dheer kahor intuusan qirin
Dukumiintiyada dacwadda ka dhanka ah Apple ee dhibaatooyinka “taabashada cudurka” ee iPhone 6 Plus ayaa muujinaya in shirkaddu ay wax ka ogayd dhibaatada muddo dheer ka hor inta aysan qirin.
Cilad ku jirta WhatsApp waxay u oggolaaneysaa xiriiradayada xirmay inay sii wadaan dhibka na haysta. Waxaan ku tusaynaa xal ku meel gaar ah
Codsiga farriinta WhatsApp wuxuu leeyahay cilad ku jirta adeegeyaasheeda taasoo ka hortageysa in barnaamijku awood u yeesho inuu si sax ah u xannibo dhammaan farriimaha laga helo xiriirada la xanibay iyo inuu awood u leeyahay inuu arko muuqaalkeenna iyo waqtiga ugu dambeeya ee xiriirkeena
Haddii aad lacag badan ku bixisay Apple beddelka batterigaaga, Apple waxay kuu soo celin doontaa € 60
Wiilasha Cupertino waxay raadinayaan inay sii wadaan inay is daaweeyaan iyagoo 60 euro ugu celinaya qofkasta oo badalay batarigiisa iphone kahor qiima dhimista dhibaatooyinkooda awgood.
Koox horumariyayaal ah ayaa Apple weydiisanaya App Store ka wanaagsan
Koox horumariyayaal ah oo isku magacaabay The Developers Union waxay ku boorrinayaan Apple inay u ballanqaaddo App Store ka wanaagsan sannad-guurada XNUMXaad
Animojis waxay mar kale naga yaabisay ku dhawaaqida cusub ee Apple
Animojis ayaa mar kale fure u ah ku dhawaaqista cusub ee Apple. Munaasabaddan, xayawaannada cusub ee laga heli karo iOS 11.3 ee Kuuriyada Koonfureed ayaa taagan.
Apple wuxuu u jeesanayaa Koobka Aduunka isagoo ku soo kordhinaya sawiro cusub Apple Clips
Sida caadada u ah dhacdooyinka saameynta, Apple ayaa cusbooneysiiya Clips Clips iyadoo lagu darayo sawirada Koobka Adduunka 2018 ee Russia
Sonos wuxuu bilaabayaa xariiq cusub oo xirmooyin kuhadal ah oo kuhadal sameeyaha
Shirkadda Mareykanka ee Sonos waxay soo saartay xariiq xirmooyin sameecado iyo alaab Sonos ah, oo aan ku heli karno qiimo dhimis xiiso leh.
Apple wuxuu xaqiijinayaa Dhacdada WWDC 2018 Juun 4 markay tahay 19:00 PM
Apple waxay hadda u dirtay casuumaadaha saxaafadda xaqiijinaysa dhacdada ugu horreysa ee WWDC 2018 ee bisha soo socota ee Juun 4 markay tahay 10:00 waqtiga maxalliga ah, 19:00 waqtiga Isbaanishka.
Ku hadla af-hayeenka Google, Google Home wuxuu ugu dambeyn imaan doonaa Spain dhamaadka bisha Juun, oo uu weheliyo Google Home Mini
Apple waxay bilaabi kartaa muraayadeeda Apple 2021
Shirkadda weyn ee Apple ayaa qorsheyneysa soo saarista muraayadaha xaqiiqda dhabta ah ee ay ugu yeeri doonto Apple Glasses sanadka 2021. In kasta oo qiimaheedu sarreeyo, haddana faa'iido aad u weyn ayaa la filayaa sannadka ugu horreeya ee iibka.
PUBG Mobile wuxuu gaaraa 10 milyan oo isticmaale firfircoon
PUBG wuxuu noqday mid kamid ah cayaaraha ugu soo dagsashada badan taariikhda wuxuuna horey usameeyay 10 milyan oo isticmaale firfircoon maalin walba.
Sumcadda Apple ee Shiinaha ayaa ku jirta shirkadda XNUMXaad
Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay sii wadaa inay wanaajiso sumcadda ay ku leedahay waddanka inkasta oo ay jiraan dhibaatooyin joogto ah iyo caqabado ka imanaya dawladda Shiinaha.
Apple wuxuu bilaabi karaa nooc ka mid ah HomePod la'aantiisa Siri iyo hoosta magaca Beats
Sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya silsilado wax soo saar oo kala duwan oo Shiine ah, Apple wuxuu ku shaqeyn karaa afmaal caqli-gal ah oo uu ku bilaabi doono hoosta magaca Beats.
HUD-ga la hagaajin karo wuxuu ku yimaadaa cusbooneysiinta cusub ee Fortnite ee iOS
Codsiyada adeegsadaha ka dib, ragga ka socda Epic Games waxay ku darayaan awood u lahaanshaha Fortnite HUD nooca cusub ee Fortnite ee iOS.
Xarfaha alifbeetadu waxay rabeen inay dib u soo cusboonaysiiyaan qaabka adeegyadooda loo qaabeeyey. Tani waxay bilaabeen Youtube Music, adeegga muusigga ee qulqulka cusub oo leh nooc bilaash ah oo leh xayeysiis, iyo nooc qaali ah oo qiimahiisu yahay $ 9,99 bishiiba.
Samsung ayaa hormarin doonta daah-furka Note 9 iyo Galaxy S10 sababtoo ah iibka liita ee S9
Warka ayaa sheegaya in ragga Samsung ay horumarin karaan soosaarida Samsung Note 9 iyo Samsung Galaxy S10 iyadoo la wajahayo iibka liita ee S9.
PayPal waxay ku iibsanaysaa iZettle-ka Iswiidhan lacag dhan 2.200 milyan oo doolar
Waxay umuuqataa in qofna uusan rabin in looga tago hababka lacag bixinta ee aaladaha mobilada waana in kastoo ...
Tidal, oo ay xafiiltamaan Apple Music, ayaa isha ku haya been abuurka xogta
Adeegga muusikada qulqulka leh, Tidal, ayaa ku lug leh muran la xiriira xogta ku saabsan tirada taranka ee ay siiso farshaxankeeda.
Xayeysiiska cusub ee Samsung ee isku dayaya inuu ku ciyaaro Apple
Samsung waxay soo bandhigeysaa ogeysiiska cusub ee Galaxy S9 kaas oo ay tahay in loo adeegsado iPhone 6 oo ku dhowaad afar sano ah si ay u awoodaan inay sare u qaadaan wanaagga Galaxy S9.
WhatsApp waxay umuuqataa inay bilawday inay aragto ahmiyada kooxdu u leedahay dad badan, cusbooneysiinta mustaqbalka waxay bilaabi doontaa inay ku darto qaar ka mid ah shaqooyinka horeyba looga heli jiray Telegram si loo wanaajiyo maarayntiisa iyo shaqadeeda.
OnePlus waxay soo bandhigtay sameecadaha dhagaha ee Bluetooth. Iyagu waa la baabtiisay iyaga oo ah OnePlus Bullets Wireless waxaanan sharxeynaa sida inta lagu gudajiro soo bandhigida aasaasihu uu ula jeedo Apple
Tani waa sheeko dheer oo halyeeyada meesha waxay ogaan doonaan inta udhaxeysa shirkadda Cupertino, Apple iyo ...
Waqooyiga Carolina waxay martigelin kartaa xarun cusub oo Apple ah
Apple waxay maanka ku haysaa inay dhisto xarun cusub, kadib dhismihii weynaa ee Apple Park. Xanta waxay soo jeedineysaa in North Carolina, gaar ahaan Research Triangle Park, ay noqon karto mid ka mid ah meelaha loogu jecel yahay agagaarka Big Apple.
Apple waxay ku darsatay 30 bangi oo cusub oo la jaan qaada Apple Pay ee Maraykanka
Tirada bangiyada iyo hay'adaha amaahda ee la jaan qaada Apple Pay-ka Mareykanka ayaa mar kale tiro ka kordhay. Munaasabaddan, 30 cusub ayaa lagu soo daray.
Microsoft waxay dooneysaa inay soo saarto Surface cusub oo qiimo jaban leh si ay ula tartanto iPad-ka iPad 349
Ragga ka socda Bloomberg ayaa siidaayay warka sheegaya in Microsoft uu ka fekerayo soo saarista Dusha sare ee qiimaha jaban si uu si buuxda ula tartamo iPad-ka cusub ee 2018.
Apple ayaa kaliya ku guuleysatay laba abaalmarin oo loogu talagalay iPhone X iyo 10,5-inch iPad Pro iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyad casri ah.
Dhammaanteen waan caddaynay in Apple ay gacanta ku hayso nidaam wadis madax-bannaan oo ay sii waddo hagaajinta iyo hagaajinta ...
Canal + France waxay siisaa adeegsadayaasheeda Apple TV 4k halkii ay ka dooran lahayd kal-soo-saarka caadiga ah
Apple iyo Canal + France waxay ku heshiiyeen adeegga cable-ka Kanaal + inay siiyaan Apple TV qalab ahaan si uu ugu raaxeysto barnaamijka adeeggan fiilada iyadoo loo marayo codsigiisa.
Spigen wuxuu ku sharfayaa Apple classics kiisaskan cusub
Spigen waxay ku dhawaaqday kiisaskeeda cusub ee xusuusta astaamaha asalka ah ee iMac iyo iPhone, oo hadda la heli karo si loo iibsado
Apple wuxuu bilaabayaa Betas 5 ee iOS 11.4 iyo nidaamyada kale
Apple waxay sii deysay macruufka 11.4 Beta 5 oo ay weheliso qaybaha kale ee noocyada kale ee nidaamkeeda deegaanka, horayba loogu heli jiray horumariyeyaasha.
Adeegsiga iPad-ka shirkad dhisme waxay keydineysaa $ 1,8 milyan
Shirkad dhisme oo Mareykan ah ayaa sheegata in tan iyo markii ay iPad ku qaadatay goobta dhismaha, keydka kharashka la xiriira uu ahaa $ 1,8 milyan sanadkii.
Niantic waxay qorsheyneysaa inay abuurto khariidad dhab ah oo la kordhiyay iyada oo ay ugu mahadcelinayaan dadka isticmaala Pokémon GO
John Hanke, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda Niantic, wuxuu hubiyay in mustaqbalka khariidad dhab ah oo la kordhiyay la abuuri doono iyadoo la kaashanayo ciyaartoyda Pokémon GO. Sidoo kale, khariidadani waxay marin u noqon kartaa horumariyeyaasha dhinac saddexaad.
Eddy Cue wuxuu ku iibinayaa gurigiisa fasaxa raaxada $ 12 milyan
$ 12 milyan waa waxa Eddy Cue weydiistay qasriga uu ku iibiyo California. Xarumaha waxay leeyihiin 5 qol iyo 6 musqulood, iyo sidoo kale tiro badan oo firaaqo ah.
Dhibaatada casriga sare-sare ... iPhone X weli waa mid deggan
Yurub gudaheeda dhibaato ayaa ka jirta iibinta taleefannada casriga ah ee casriga ah. Apple ayaa hoos u dhacday tirada shixnadaha lagu sameeyay Q1-daan, laakiin iphone X-kiisa wuxuu wali kujiraa 25% shixnadaha ay soosaarto Apple.
Apple waxay ku horumarin doontaa Khariidadaha Apple diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Apple ayaa qorsheyneysa inay adeegsato diyaaradaha aan duuliyaha laheyn si ay u horumariso khariidadeeda, khariidadaha Apple. Hindisahan ayaa ka bilaaban doona adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaanno Drones-ka Waqooyiga Carolina, USA
Caqli gal ma tahay in la bilaabo iibinta kiisaska iPhone SE 2018? Dabcan maya.
Iyadoo aan xitaa la ogeyn naqshadda iyo astaamaha iPhone-ka cusub ee SE SE 2018, Olixar iyo MobileFun waxay ku dhaqaaqeen wax quus ah waxayna bilaabeen inay iibiyaan kiiskii ugu horreeyay ee qalabkan oo aan weli la soo bandhigin.
Apple waxay bixisaa xulashada wadamada xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ee Carpool Karaoke oo bilaash ah
Barnaamijkan TV-ga ayaa ah codsi ay wadamada qaar ku hayaan iDevices-ka ay ku maareeyaan adeegyadooda baahinta.Waxaa maanta Apple lagu daray xilli-ciyaareedkii ugu horreeyay ee taxanaheeda Carpool Karaoke oo bilaash ah.
Denmark, Sweden, India iyo Taiwan ayaa hela Apple Watch Series 3 LTE
Wadamo cusub ayaa helay Apple Watch Series 3 maanta. Isticmaalayaasha keydka dhigay 4-ta Maajo waxay aadi karaan dukaamada si ay uga soo qaataan iyo kooxaha cusub ee daneynaya inay iibsadaan.
Apple wuxuu wadada u xaarayaa habka shubka aluminium ee eber-u-bixida kacaanka
Ballanqaadka Apple ee deegaanka ayaa runtii muhiim ah sannadahanna waxay arkayaan dhaqdhaqaaqyo muhiim ah oo ...
Miitomo wuxuu leeyahay macsalaameyn hubaal
Ciyaartii ugu horreysay ee Nintendo oo ku saabsan moobilada moobiilka ayaa ugu dambayntii la macsalaameeyay sababo la xiriira guushii yareyd ee ay soo martay labadii sano ee soo dhaafay tan iyo markii la bilaabay.
Apple wuxuu bilaabaa inuu meesha ka saaro barnaamijyada wadaagga goobta iyadoo aan la helin ogolaansho isticmaale
Apple waxay uga digeysaa kuwa soo saara barnaamijyada in barnaamijyadooda laga saarayo App Store maadaama ay macluumaadka la wadaagayaan cid saddexaad, sida goobta, si ay uga saaraan koodhka xun.
Apple wuxuu yeelan karaa kaarkiisa amaahda ee 2019
Apple waxaa laga yaabaa inay kala xaajooto Goldman Sachs inay soo saarto kaarkiisa amaahda si ay ugu isticmaasho Apple Pay aaladaha moobaylka.
Xanta ku saabsan iPhone SE 2 oo leh naqshad la mid ah iPhone X soo celinta mahadnaqda daadinta qalabka qaar
Dhowr usbuuc ka hor WWDC ee soo socota ee furitaanka Muhiimka ah, xanta ku saabsan iPhone SE 2 cusub oo leh shaashad la mid ah tii iPhone X soo noqoshada iyada oo ay ugu wacan tahay daadashada qalabka.
Apple waxay iibin doontaa rukhsad si ay uga soo gudbiso adeegyada barnaamijka TV-ga
Laga bilaabo sanadka soo socda, sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay, Apple waxay bilaabi kartaa inay soo bandhigto adeegyo fiidiyoow ah iyada oo loo marayo barnaamijka TV-ga
Apple waxay joojisay mashruucii xarunta xogta cusub ee Ireland
Ka dib markii uu ku guuleystey dhammaan ilihii ka soo horjeeday dhismaha xarun xog oo ku taal Atherny, Ireland, Apple waxay qaadatay go'aan ay si rasmi ah u joojineyso mashruuca, sababo la xiriira rafcaan cusub oo la horkeenay maxkamadda Yurub.
Kuwani waa sheekooyinka ugu muhiimsan ee Android P, waxaanan jeclaan lahaa inaan ku haysto iOS 12
Android P waxaa ku jira qaar ka mid ah isbeddelada aan si xad-dhaaf ah u burburin laakiin taas oo hagaajineysa khibrada isticmaale iyo in badan oo naga mid ah aan u saxiixi doonno iOS 12
Podcast 9 × 31: Google wuxuu dhaafaa Siri midigta
Ka dib dhacdo si cadaalad ah u cunteysey Google oo aysan jirin war weyn oo lagu muujiyo gudaha ...
Jabsade Shiine ah ayaa maamusha inuu ku rakibo Cydia iphone-kiisa iOS 11.3
Ming Zhen wuxuu ku guuleystey inuu ku rakibo Cydia macruufka 11.3 ama wixii la mid ah: wuxuu jajabiyay nooc ka mid ah macruufka taas oo faa'iidooyinka qaarkood ay ka adkaadeen in Apple ay xirtay iOS 11.3.1.
Google wuxuu na baraa Google Assistant wax walbana Siri maahan
Kaaliyaha Google wax badan ayuu ku hagaajiyaa wararka lagu soo bandhigo Google I / O, isagoo awood u leh inuu naga dhigo inaan ka hadalno kaaliyaha koowaad ee runtii loo tixgelin karo sida oo kale.
Xayeysiiska "Barbers" ee Apple, ayaa lagu abaal mariyay Abaalmarinta Kooxda Agaasimayaasha Farshaxanka
Markii aan ka hadlayno ogeysiisyada Apple, waxaan hore u ogaanay in si taxaddar leh loo daryeelay oo waxaan dhihi karnaa way yar yihiin ...
Waxaan tijaabinay InstaWrist, ku noqoshada Instagram ilaa Apple Watch
Dib u eegista barnaamijka InstaWrist, oo ah codsi ku keenaya quudinta Instagram-ka Apple Watch, suurtagalnimada in Instagram joojisay taageerida casriyayntii hore.
IOS 11.4 waxay xayiraysaa isticmaalka Sanduuqa GrayKey 7 maalmood kadib
Marka la sii daayo nooca soo socda ee iOS 11.4, Apple wuxuu soo bandhigi doonaa hawl cusub oo xayiraya dekedda isgaarsiinta ee aaladda noocaas ah ee iOS, marka aan la furin terminal-ka toddobaad gudihiis.